War murtiyeed laga soo saaray shirkii Afisiyooni iyo mudda doorashada lagu soo gabagabeynayo | Warbaahinta Ayaamaha
War murtiyeed laga soo saaray shirkii Afisiyooni iyo mudda doorashada lagu soo gabagabeynayo
MUQDISHO-AYAAMAHA-Golaha Wadatashiga Qaran oo soo gabagabeeyay shirkii uga socday Muqdisho, ayaa soo saaray war-murtiyeed ka kooban 18 qodob oo khuseeya hufnaanta iyo jadwaleynta xilliga ay soo dhammaaneyso doorashada.
Afhayeenka Xukuumada Maxamed Ibraahim Macalimuu oo saxaafada u akhriyey war murtiyeedka ayaa sheegay in dhamaan ka qeyb galayaasha shirka ay saxiixeen war murtiyeedkaasi.
Shirka qodobada ugu muhiimsan waxaa ka mid ah Guddiyada Doorashooyinka iyo duubabka dhaqanka oo la siiyey awood buuxda, sidoo kale waxaa la sheegey in Doorashada Golaha Shacabka lagu soo gebogebeeyo 15 Janaayo illaa 25 Febraayo.
Ciidamada Soomaalida ayaa la faray in dhexdhexaad ka noqdaan siyaasadda, halka Amisomna la faray in ay xoojiso amniga Villa Somalia oo ay deggen yihiib Farmaajo iyo Rooble.
War-saxaafadeedkan ayaa u qornaa sidan:
11- Si loo ilaaliyo wada–shaqaynta Guddiyada Doorashooyinka, Golaha Wadatashiga Qarankawuxuu ku wargalinayaa dhammaan Guddiyada Doorashooyinka heerar kooda kala duwan,in ay ilaaliyaan nidaamka iyo kala danbaynta, kuna dhaqmaan, si waafaqsan heshiishyada iyo habraacyada Doorashada ee dagsan;